Ukuxhasa UBukumkani—Ukwakhela Ukunqula Nokunikela Ngezinto Zokunceda | UBukumkani BukaThixo
Ekhohlo: ISwitzerland ithumela izinto zokunceda kubazalwana bethu baseJamani, ngo-1946; ekunene: EJapan kuphinda kwakhiwa iHolo yoBukumkani emva kwetsunami, ngo-2011
Ukuxhasa UBukumkani—Ukwakhela Ukunqula Nokunikela Ngezinto Zokunceda
UFIKA kwiHolo yoBukumkani yenu ingeyiyo le uyaziyo. Ubusoloko uzingomb’ isifuba ngesi sakhiwo. Kusenokwenzeka ukuba uthi xa ucinga ngomsebenzi wokuyakha kwiminyaka eyadlulayo uncume wedwa. Kodwa ngoku umlomo awuvaleki kuba okwexeshana le Holo yoBukumkani ihlala iimpahla zokunceda. Emva kokuba isaqhwithi esisandul’ ukuntlitha ummandla ohlala kuwo sibangele izikhukula saza senza umonakalo, iKomiti Yesebe ikhawuleze yalungiselela ukuba amaxhoba eso saqhwithi afumane ukutya, iimpahla, amanzi acocekileyo nezinye izinto. Ezi mpahla ziyiminikelo zibekwe kakuhle. Ngoxa abazalwana noodade bengena benikwa ezi zinto, iinyembezi zovuyo ziyazehlela.
UYesu wathi olona phawu baya kubonwa ngalo abantu bakhe kukuthandana. (Yoh. 13:34, 35) Kweli candelo siza kubona indlela oluboniswa ngayo uthando lwamaKristu xa kusakhiwa iiholo nakumalungiselelo okunceda anikelwa ngamaNgqina kaYehova. Olo thando lububungqina bokuba siphila phantsi kolawulo loBukumkani bukaYesu.
Ivela phi le mali? Isetyenziswa njani?
IiHolo zisisa uzuko kuThixo, kodwa kukho enye into ayixabisa nangakumbi.
Sazi njani ukuba umsebenzi wokunceda yinxalenye yokunikela inkonzo engcwele kuYehova?